Version 0.3.8 – Asụsụ nchọpụta
December 20, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Nke a na-agbakwụnye, version nchọpụta asụsụ n'ihi na website ọbịa (dabere na ihe nchọgharị mkpakorita – geoip nwere ike kwukwara, ma ọ bụrụ na izu oke mmasị a ga-e). Ọ na-akwado ọhụrụ 'rel = canonical' ke obufa WordPress (2.9) nke e wepụtara ụnyaahụ. Ihe mbụ udeme keagwaraogwa bugfixes bụkwa ebe a. Ugboro na anyị chọrọ na-ekele Kevin Hart maka enyemaka ya.
Nke a bụ nke ikpeazụ version na na eze na-akwado WordPress 2.7, dị ka anyị ga-kama anọ anyị na-ejedebeghị na ego na mma ka na-akwado koodu ochie isi. N'ihi na onye ọ bụla nke na-eji otu agadi WordPress anyị abụọ aro: 1. kwalite. ma ọ bụ 2. na-eji otu agadi transposh tọhapụ. Atụmatụ maka ọdịnihu ga-abụ ụdị, otu ugboro WordPress 3.0 a ga-esi anyị ga-idebe akwado 2.8. Ọ bụla kwuru na nke a ga-adara.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ, RSS, WordPress 2.8, WordPress 2.9, WordPress ngwa mgbakwunye
June 9, 2009 site na rịọ 5 Comments
Ọhụrụ a tọhapụ nabatara ahụ na-abịanụ-ufụn ọhụrụ WordPress 2.8. Nke a na-agụnye nkwado ntọhapụ maka scripts na ukwu mma nke 2.8 nke ga-enyere gị na peeji nke iji mara ngwa ngwa ma na-elu scores na yahoo si Yslow. Gụnyekwara bụ tọn ahụhụ fixes, ọtụtụ ọwọrọiso bụ fix maka gburugburu nke ahụ emeghị ka na-arụ ọrụ ma na anyị ga na-amasị na-ekele Karl maka enyemaka ya atụ m mma. Anyị ga-amasị na-ekele Mike maka enyemaka ya debugging nsogbu prefixes o gbochie akụkọ ihe mere eme na ọnụ ọgụgụ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Ọzọkwa mara bụ na asụsụ mba ọzọ RSS faili ntanetịime kwesịrị na-arụ ọrụ ugbu a.
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a tọhapụ – ka mgbe – anyị na-enwe na-anụ gị aro
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ, RSS, WordPress 2.8, WordPress ngwa mgbakwunye